Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Haweenka Ogadenya (UHO) oo London Lagu Qabtay.
Shirkii Haweenka Ogadenya (UHO) oo London Lagu Qabtay.
Magaalada London waxaa Maalinimadii Sabtida ooy taariikhdu ahayd 17/10/2015 ku qabsoomay shir ay isugu yimaadeen gudiga UHO ee wadanka UK. Shirkan maamulku isugu yimid waxaa looga arrinsaday Barnaamijyo Ururku soowaday meesha ay marayaan iyadoo lagu dhagaystay warbixibno ku saabsan barnamijyadas.
Sidoo kale waxaa looga arrinsaday barnamijyo cusub oo ururku Hawenku qaban doono haduu ilaahay yiraahdo mustaqbalka dhaw. Barnamijyadan waxaa kamida Siminaar loo qaban doono ururka haweenka sideey noo sheegtay Gudomiyaha Ururka Haweenka UK Marwo Sooc Iimaan.
Ururka Haweenka ayaa sidoo kale ugu baaqay Bulshada Somalida Ogadeniya ineey laba jibaaran Halgankooda kana hor tagaan isku dayga Cadowga ee ku aadan sidii loo boobi lahaa khayraadka Dhulka Somalida Ogadeniya.
Ururka ayaa u hanbalyeeyay Ciidamada Qalabka sida ee JWXO kuwaasoo jiif iyo joogba u diiday gumeysiga Ethiopia. Ururka ayaa sidoo kale dhaleeceeyay Gumeysiga Ethiopia xadgudubyada uu ku hayo shacabka Somalida Ogadeniya.
Ururka haweenka Somalida Ogadeniya waxa dalka UK ugu baaqayaa inaysan soo dhaweyn gumeysiga Ethiopia oo raba ineey booqasho ku yimaadaan Dalka UK kuwaasoo Borobagaande been ah wada iyo horumar aan waxba ka jirin.